इमरान हा’शमी र स’नी लि’योनीका छोरा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालयमा स्नातक पढ्दै ! – Gandaki Chhadke
By गण्डकी छड्के Last updated Dec 10, 2020
काठमाडौं। भारतको बिहार राज्यको मु’जफ्फरपुरमा रहेको बा’बासाहेब भीमराव अ’म्बेडकर बिहार विश्वविद्यालयमा बलिउड अ’भिनेता इमरान हा’शमी र अभिनेत्री स’नी लि’योनीका छोराले स्नातक त’हमा पढ्दैछन् । यो खबर अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । खबर भाइरल हुन थालेपछि मानिसहरुले यो सो’चिरहेका छन् कि इमरान र स’नीको बिहे कहिले भयो ? वा ती छोरा यी दुइले वि’वाहेतर सम्बन्धबाट जन्माएका हुन् ।द हिन्दूको रिपोर्टअनुसार खासमा यो उ’पद्रो तिनै विद्यार्थीको हो ।
विश्वविद्यालयमा स्नातक पार्ट–२ अध्ययनरत ती छात्रले परीक्षाको लागि भरिएको आफ्नो फाराममा पिताको नाम इ’मरान हा’शमी र आमाको नाम स’नी लि’योनी लेखिदिए । अझै रो’चक त के भने उनले आफ्नो ठेगाना च’तुर्भुज लेखिदिए । च’तुर्भुज मु’जफ्फरपुरमा दे’हव्यापारका लागि प्रसिद्ध क्षेत्र हो ।विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक डा. मनोज कुमारका अनुसार छात्रलाई यो कर्’तुतको लागि का’रवाही गरिनेछ । जाँ’चपछि उनले भरेको फ’रामलाई र’द्द गरिनेछ । अनलाइन फाराम भर्ने क्रममा छात्रहरुले यस्ता उ’पद्रो कैयौं पटक गरेका छन् ।
यो परीक्षा फाराम सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । सामाजिक संजालमा फा’राम भाइरल भएपछि मात्र विश्वविद्यालयले यसको जानकारी पाएको थियो ।विश्वविद्यालय प्र’शासनले जाँच गर्दा मी’नापुरको धनराज भ’गत डिग्री कलेजको तर्फबाट भरिएको परीक्षा फा’राममा पिताको नाम इमरान हा’शमी र आमाको नाम स’नी लि’योनी लेखिएको पाइएको छ । यसअघि पनि फाराम भर्ने क्रममा विद्यार्थीले विभिन्न उ’पद्रो गरेका थिए । केही विद्यार्थीले फा’राम भर्ने क्रममा बि’ल र ला’इसेन्सको प्रति अपलोड गरिदिएका थिए । यस्ता फा’रामहरु र’द्द गरिएका थिए ।